2 အလွှာမြင့်သော TG PCB FR4 TG170 ပစ္စည်း Quickturn PCB HASL ခဲအခမဲ့ PCB Fast Delivery - တရုတ်နိုင်ငံ2အလွှာမြင့်သော TG PCB FR4 TG170 ပစ္စည်း Quickturn PCB HASL ခဲအခမဲ့ PCB Fast Delivery ပေးသွင်း,စက်ရုံ -WMD
2 အလွှာမြင့်သော TG PCB FR4 TG170 ပစ္စည်း Quickturn PCB HASL ခဲအခမဲ့ PCB Fast Delivery
101.6*406.4MM / 1UP
2 TG170 Layer
2 အလွှာမြင့်သော TG ဘုတ်အဖွဲ့. base ပစ္စည်း FR4 Tg170 ဖြစ်ပါသည်. 1.6မီလီမီတာ±0.13မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့အထူ. HASL ခဲအခမဲ့, hot-Air ကိုဂဟေဆက် Level ။ အဆိုပါ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်4FR4 TG170 ပစ္စည်းနှင့်အတူအလွှာ. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်. PCB ညီလာခံထုတ်လုပ်သူ, အွန်လိုင်း PCB ဒီဇိုင်နာ, စျေးပေါ circuit board ။ ကျနော်တို့ပစ္စည်း FR4 ရှိ, Roger, Arlon, Nelco, Taconic, Teflon, CEM-1, CEM-3, လူမီနီယမ်, HIGH TG ဘုတ်အဖွဲ့, အမြင့် CTI,
4 အလွှာ PCB အမြင့် TG ဘုတ်အဖွဲ့ ENIG finish ကို2တဦးတည်း panel ကို Quickturn PCB FR4 TG170 ပစ္စည်း ENIG 1u "Fast Delivery အတွက်အမျိုးအစားများ
4ENIG 2U "High-တိကျစွာအစိမ်းရောင် Soldermask-အဝါရောင် Coverlay အတူအလွှာ Flexible-တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့
2 အလွှာ 2OZ OSP FR4 TG135 နဲ့ LED အဖြူရောင်မှင်အနက်ရောင်ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ